यी जवान युवतीले ७० वर्षीय वृद्धसँग गरिन् विवाह ! कारण थाहा पाउनु भएमा चकित पर्नुहुनेछ ! - Kanchanjangha Online
कञ्चनजंघा अनलाईन २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०२:१८ मा प्रकाशित ( ३ साल अघि) ६५३ पाठक संख्या
एजेन्सी– हामीहरु सबैलाई थाहानै छ कि संसारका हरेक महिला तथा पुरुषहरु जीवनमा एकपटक बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने गर्छन। यसरी बैवाहिक सम्बन्धमा रहन इछुक महिला तथा पुरुषको उमेरमा केही वर्षको फरक हुनु सामान्य रुपमा हेर्ने गरिन्छ। तर कहिलेकाँही यस्तो अचम्मलाग्दो जोडी समेत देख्न सकिन्छ कि जहाँ महिला र पुरुष बीचको उमेरमा निकै अन्तरल भएको हुन्छ। कोहीबेला महिला र पुरुषबीच मन मिलेको अवस्थामा उमेरको ख्याल नराख्दा समेत यस्तो अवस्था आउन सक्छ। केही पुरुषहरु आफ्ना छोरि समान देखिने युवतीहरुसँग बिहे गर्ने गर्छन जुन धेरै अचम्मलाग्दो हुने गर्छ।
आजभोलि सामाजिक संजालमा एक जोडीको बिवाहको तस्बिर भाइरल भईरहेको छ। एक वृद्ध व्यक्तिले युवतीसंग बिहे गरेका तस्बिर विभिन्न मिडिया मार्फत भाइरल भएपछि संसारभरका मान्छेहरुले अचम्मित मान्दै उक्त यूवतीप्रति दया देखाएका छन्।
तस्बिर हेर्दा तपाईहरु जो कोहिले अचम्मित मान्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि आफू भन्दा करिब ४० वर्ष कान्छी यूवती विहे गर्ने पुरुष को हुन् ? हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराऊँछौँ कि यसरी आफु भन्दा धेरै कान्छी यूवतीसंग बिवाह गरेर सामाजिक संजालमा भाइरल हुने यी वृद्धा एपोलो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेश कुमार हिमतसंग्का हुन्।
यस समाचार तयार पर्ने समयमा भने यी वृद्ध व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यापारी रहेको र एपोलो अस्पतालको निर्देशक नभएको बुझिएको छ। यसैगरी हाल उनि हिमतसंग्का अटो ईन्टरप्राइजेजका कार्यकारी निर्देशकको पदमा भने अहिले सम्मपनि रहेका छन्। उक्त कम्पनि उनको निजि रहेको र परिवारका अन्य सदस्यले समेत यसमा उनलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्।
जब राजेश कुमार हिमतसंग्काको बिवाह पश्चात सामाजिक संजालमा तस्बिर भाइरल भएको र आफ्नो निजि मामलामा समेत गलीगलौच आउने गरेकाले आफु चिन्तित रहेको उनि बताउछन्। उनले आफ्नो पूर्व पत्नीको मृत्यु पश्चात यी युवतीसंग बिवाह गरेको रहस्य समेत खुलेको छ